Kooxda Liverpool oo Rikoor xun dhigtay kadib bar-bardhicii ay kala kulantay West Brom
Home Horyaalka Ingiriiska Kooxda Liverpool oo Rikoor xun dhigtay kadib bar-bardhicii ay kala kulantay West...
Kooxda Liverpool ayaa bar-baro niyad jab leh kala kulantay kooxda West Brom kulan ka tirsanaa horyaalka premier League oo ka dhacay Anfield.
Gool uu Sadio Mane u dhaliyay ayaa ka caawin waayay Reds in ay 3-da dhibcood kala baxdo kulanka oo ay ahaayeen kooxda maamulaysay ciyaarta.
Kadib bar-barahaas kooxda Liverpool ayaa boodhka ka jafatay rikoodh xun oo ay ka dhigtay premier League gaar ahaan garoonkeeda.
Kulankan ayaa noqonaya midkii ugu horeeyay ee ay Liverpool dhibco ku lumiso garoonkeeda Anfield iyaga oo waliba ku hor maray goolka lana ciyaaraya koox ku jira boosaska looga hadho horyaalka tan ilaa December 2016 markaas oo ay bar-baro 2/2 ah la gashay West Ham.
Previous articleWararka Suuqa kala iisbiga kuwooda ugu muhiimsan ee Caawa, Luka Modric oo heshiis saxiixay iyo Qodobo kale
Next articleLuka Modric oo ogolaaday heshiiska cusub ee Real Madrid.